तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ ? छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको भविष्य – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ ? छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको भविष्य
अनुसार पुरुषको दायाँ हात र महिलाको बायाँ हातको रेखा हेर्ने गरिन्छ । हरेक व्यक्तिको हत्केलामा विभिन्न प्रकारका हस्तरेखाहरु हुन्छन् ।आज हामी तपाईलाई हत्केलामा भएको यस्तै एउटा रेखाको बारेमा बताउँन गइरहेका छौ ।
उक्त विश्वविद्यालयमा भएको शोधमा शोधकर्ताले २ मिलियन मानिसको बारेमा जानकारी एकिकृत गरेका थिए । जसमा जीवित वा मृत दुवै मानिसमा गरिएको उक्त शोधका अनुसार जुन मानिसको हातमा x चिन्ह हुन्छ उनीहरु ठूला नेता हुने , कोहि व्यक्ति लोकप्रिय वा कोहि व्यक्ति ठूला–ठूला कामको लागि प्रसिद्ध भएको भेटिएका थिए ।
मोरङ जिल्लामा फेला परेको यस्तो अनौठो जीव देखेर स्थानीय आश्चर्य चकित [भिडियो सहित]